25 Ka oge na-aga, Samuel+ nwụrụ; Izrel dum wee zukọta kwaara ya ákwá arịrị+ wee lie ya n’ụlọ ya dị na Rema.+ Devid wee bilie gbadaa n’ala ịkpa Peran.+ 2 E nwere otu nwoke na Meyọn,+ ọ na-arụ ọrụ n’obodo Kamel.+ Nwoke a bụkwa nnukwu mmadụ, o nwere puku atụrụ atọ na otu puku ewu; ọ na-akpacha ajị+ atụrụ ya n’obodo Kamel. 3 Aha nwoke ahụ bụ Nebal,+ aha nwunye ya bụ Abigel.+ Nwunye ya nwere ezi uche,+ maakwa mma ile anya, ma di ya dị aka ike, na-akpakwa agwa ọjọọ;+ ọ bụ onye Keleb.+ 4 Devid wee nọrọ n’ala ịkpa nụ na Nebal na-akpacha ajị+ atụrụ ya. 5 Devid wee ziga ụmụ okorobịa iri, Devid wee gwa ụmụ okorobịa ahụ, sị: “Gbagoonụ n’obodo Kamel, jekwuru Nebal jụọ ya otú o mere+ n’aha m. 6 Nke a bụ ihe unu ga-agwa nwanne m, ‘Ya dịrị gị mma,+ ya dịkwara ezinụlọ gị mma, dịkwara ihe niile i nwere mma. 7 Anụrụ m na i nwere ndị na-akpacha ajị anụ. Anyị na ndị na-azụrụ gị atụrụ nọrọ.+ Anyị enyeghị ha nsogbu,+ ọ dịghịkwa ihe ha ọ bụla furu efu n’ụbọchị niile ha nọrọ n’obodo Kamel. 8 Jụọ ụmụ okorobịa gị, ha ga-agwakwa gị, ka ụmụ okorobịa m nweta ihu ọma gị, n’ihi na ọ bụ n’ụbọchị ọma ka anyị bịara. Biko, nyetụ ndị ohu gị nakwa nwa gị Devid ihe ọ bụla aka gị ruru.’”+ 9 Ụmụ okorobịa Devid wee bịa gwa Nebal ihe a niile n’aha Devid, wee cherezie. 10 Nebal wee zaa ndị na-ejere Devid ozi, sị: “Ònye bụ Devid,+ ònyekwa bụ nwa Jesi? N’oge a, ndị ohu na-agbapụ n’aka nna ha ukwu dị ọtụtụ.+ 11 M̀ ga-ewere achịcha+ m na mmiri m na anụ m gbuuru ndị na-akpachara m ajị anụ nye ndị ikom m na-amadịghị ebe ha si?”+ 12 Ụmụ okorobịa Devid wee tụgharịa laa wee bịa kọọrọ ya ihe a niile. 13 Ozugbo ahụ, Devid sịrị ndị ikom ya: “Onye ọ bụla kee mma agha ya n’úkwù!”+ Onye ọ bụla wee kee mma agha ya n’úkwù, Devid kekwara mma agha ya n’úkwù; ha wee soro Devid gbagowe, ihe dị ka narị ndị ikom anọ, ebe narị ndị ikom abụọ nọ ọdụ n’akụkụ ibu ha.+ 14 Ka nke a na-eme, otu n’ime ụmụ okorobịa Nebal kọọrọ Abigel, nwunye ya, sị: “Lee! Devid si n’ala ịkpa zite ndị ozi ka ha gọzie nna anyị ukwu, ma ọ kpọrọ ha iyi.+ 15 Ndị ikom ahụ mesoro anyị mmeso ọma, ha enyeghịkwa anyị nsogbu, ọ dịghịkwa otu mkpụrụ ihe funahụrụ anyị n’ụbọchị niile anyị na ha jegharịrị mgbe anyị nọ n’ọhịa.+ 16 Ha bụụrụ anyị mgbidi+ gbaa gburugburu ma n’abalị ma n’ehihie, n’ụbọchị niile anyị na ha nọrọ, mgbe anyị na-azụ ìgwè ewu na atụrụ. 17 Leba anya na ya mara ihe ị ga-eme, n’ihi na e kpebisiwo+ ike ime ka ọdachi dakwasị nna anyị ukwu na ụlọ ya dum, ebe ọ bụ onye na-abaghị n’ihe+ nke na o siri ike ịgwa ya okwu.” 18 N’egbughị oge, Abigel+ mere ngwa ngwa chịrị narị ogbe achịcha abụọ, burukwa nnukwu ite mmanya abụọ+ na atụrụ ise a kwadebeworo+ na ihe ọ̀tụ̀tụ̀ sia ise nke ọka* a ṅara n’ọkụ+ nakwa otu narị achịcha mkpụrụ vaịn a mịrị amị+ nakwa mbadamba achịcha mkpụrụ fig+ dị narị abụọ wee dọkwasị ha n’ịnyịnya ibu. 19 O wee sị ụmụ okorobịa ya: “Burunụ m ụzọ gawa.+ Lee! M ga-eso unu n’azụ.” Ma ọ gwaghị di ya Nebal ihe ọ bụla. 20 O wee ruo na mgbe ọ nọ n’elu ịnyịnya ibu+ na-agbada ugwu na nzuzo, lee, Devid na ndị ikom ya na-agbadata izute ya. O wee zute ha. 21 Ma Devid kwuru, sị: “Ọ bụ nnọọ n’efu ka m chebere ihe niile nwoke a nwere n’ala ịkpa, ọ dịghịkwa otu n’ime ihe niile o nwere nke furu efu,+ n’agbanyeghị nke ahụ, o ji ihe ọjọọ na-akwụ m ụgwọ ihe ọma.+ 22 Ka Chineke si otú a mee ndị iro Devid, ka ọ tụkwasịkwa ihe na ya+ ma ọ bụrụ na mụ ahapụ onye ọ bụla n’ime ndị ya niile bụ́ nwoke+ ndụ ruo ụtụtụ.”+ 23 Mgbe Abigel hụrụ Devid, o mere ngwa ozugbo si n’ịnyịnya ibu ya rịdata wee gbuo ikpere n’ala, kpudo ihu n’ala+ n’ihu Devid wee kpọọ isiala. 24 O wee daa n’ụkwụ ya,+ sị: “Onyenwe m, ka njehie ahụ dị n’isi m;+ biko, ka ohu gị nwaanyị kwuo okwu ná ntị gị,+ geekwa ntị n’okwu ohu gị nwaanyị. 25 Biko, ka onyenwe m ghara itinye uche na nwoke a na-abaghị n’ihe+ bụ́ Nebal, n’ihi na otú aha ya dị ka ya onwe ya dị. Nebal bụ aha ya, nzuzu dịkwa ya n’ahụ́.+ Ma mụ onwe m, bụ́ ohu gị nwaanyị, ahụghị ụmụ okorobịa onyenwe m, bụ́ ndị i zitere. 26 Ugbu a, onyenwe m, dị nnọọ ka Jehova dị ndụ,+ dịkwa nnọọ ka mkpụrụ obi gị dị ndụ,+ Jehova egbochiwo+ gị ịbanye n’ikpe ọmụma ọbara+ na iji aka gị zọpụta onwe gị.+ Ka ndị iro gị na ndị na-achọ ime onyenwe m ihe ọjọọ dịrị ka Nebal.+ 27 Ma onyinye a ohu gị nwaanyị buteere onyenwe m iji gọzie ya,+ a ga-enye ya ụmụ okorobịa ndị na-agbaso nzọụkwụ+ onyenwe m. 28 Biko, gbaghara ohu gị nwaanyị+ mmejọ ya, n’ihi na Jehova ga-ewuru onyenwe m ụlọ na-adịgide adịgide,+ n’ihi na ọ bụ agha Jehova ka onyenwe m na-alụ;+ a gaghịkwa ahụ ihe ọjọọ ọ bụla n’ime gị n’ụbọchị gị niile.+ 29 Mgbe mmadụ biliri ịchụ gị ọsọ na ịchọ mkpụrụ obi gị, a ga-ekechi mkpụrụ obi onyenwe m n’akpa ndụ+ nke dị n’aka Jehova bụ́ Chineke gị;+ ma ọ ga-agbapụ mkpụrụ obi ndị iro gị dị ka à ga-asị na e si n’èbè gbapụ ya.+ 30 Ọ ga-erukwa na, ebe ọ bụ na Jehova ga-emere onyenwe m ihe ọma dị ka ihe niile o kwuru si dị, ọ ga-ahọpụta gị ịbụ onye ndú Izrel.+ 31 Ka nke a ghara ịghọrọ gị ihe ịma jijiji ma ọ bụ ghọọrọ obi onyenwe m ihe ịsụ ngọngọ, site n’ịwụfu ọbara na nkịtị+ nakwa site n’ime ka onyenwe m jiri aka ya zọpụta onwe ya.+ Jehova ga-emekwara onyenwe m ihe ọma, biko, cheta+ ohu gị nwaanyị.” 32 Devid wee sị Abigel: “Ka Jehova bụ́ Chineke Izrel, bụ́ onye zitere gị taa ka ị bịakwute m, bụrụ onye a gọziri agọzi!+ 33 Ka ezi uche gị bụrụ ihe a gọziri agọzi,+ ka gị onwe gị, bụ́ onye gbochiri m taa ịba n’ikpe ọmụma ọbara+ na iji aka m zọpụta onwe m,+ bụrụkwa onye a gọziri agọzi. 34 N’aka nke ọzọ, dị nnọọ ka Jehova bụ́ Chineke Izrel dị ndụ, onye gbochiri m ime gị ihe ọjọọ,+ a sị na i meghị ngwa wee bịakwute m,+ a garaghị enwe onye ga-afọdụrụ Nebal ma chi bọọ, ya bụ, onye ọ bụla bụ́ nwoke.”+ 35 Devid wee nara ya ihe o buteere ya, wee sị ya: “Laa n’ụlọ gị n’udo.+ Lee, egewo m ntị n’olu gị, m ga-emekwara gị ihe ị chọrọ.”+ 36 E mesịa, Abigel bịakwutere Nebal, ọ nọkwa n’ebe ahụ na-enwe oriri n’ụlọ ya dị ka oriri onye eze;+ obi Nebal na-enwekwa aṅụrị n’ime onwe ya, ọ ṅụrọkwara anya;+ ọ gwaghịkwa ya ihe ọ bụla, ma ọ bụ ihe nta ma ọ bụ ihe ukwu, ruo mgbe chi bọrọ. 37 O wee ruo n’ụtụtụ, mgbe mmanya ahụ pụchara Nebal n’anya, na nwunye ya gwara ya ihe ndị a. Obi+ wee kụchie ya, ya onwe ya wee dị ka nkume. 38 Mgbe nke ahụ gasịrị, ihe dị ka ụbọchị iri gafere, Jehova tiri Nebal ihe,+ o wee nwụọ. 39 Devid wee nụ na Nebal anwụọla, o wee sị: “Ka Jehova bụrụ onye a gọziri agọzi, bụ́ onye kpeworo ikpe+ nkọcha a kọchara m+ iji napụta m n’aka Nebal, gbochiekwa ohu ya ime ihe ọjọọ,+ Jehova emewokwa ka Nebal jiri isi ya buru ihe ọjọọ ya!”+ Devid wee ziga ozi gwa Abigel ka ya kpọrọ ya ka ọ bụrụ nwunye ya.+ 40 Ndị na-ejere Devid ozi wee bịakwute Abigel n’obodo Kamel ma gwa ya okwu, sị: “Devid ezitewo anyị ịkpọrọ gị ka ị bụrụ nwunye ya.” 41 Ozugbo ahụ, o biliri kpọọ isiala,+ sị: “Lee ohu gị nwaanyị ka m bụrụ nwaanyị na-eje ozi nke ga na-asa ụkwụ+ nke ndị ohu onyenwe m.”+ 42 Abigel+ wee mee ngwa bilie nọkwasị+ n’elu ịnyịnya ibu, ya na ụmụ nwaanyị ise na-ejere ya ozi, bụ́ ndị ji ụkwụ na-abịa ya n’azụ; o wee soro ndị ozi Devid wee ghọọ nwunye ya. 43 Devid esiwokwa na Jezril+ kpọrọ Ahịnoam;+ ndị inyom ahụ, ha abụọ, wee ghọọ nwunye ya.+ 44 Ma Sọl akpọrọwo Maịkal+ nwa ya nwaanyị, bụ́ nwunye Devid, kpọnye Pọltaị,+ nwa Leyish, bụ́ onye Galim.+